Ruuxaani oo ku horreeya doorashada Iiraan - BBC News Somali
Ruuxaani oo ku horreeya doorashada Iiraan
Image caption Madaxweyne Ruuxaani oo codkiisa dhiibanaya
Dalka Iiraan waxaa la soo gebagabeeyay codbixinta doorashada madaxweynaha. Wararka hor dhaca ee la helayo waxaa ay muujinaya in madaxweynaha xilka haya Xasan Ruuxaani uu markale ku guleysan doono doorashada madaxtinimada ee dalkaasi.
Balse ninka ay is hayaan ee Ibraahim Raisi ayaa durbaba gudbiyay cabasho, ka dib markii uu sheegay in doorashadani ay hareeyeen wax isdaba marin.
Ruuxaani ayaa wax ka bedelay xiriirka Iiraan iyo beesha caalamka, hasayeeshee waxaa intii uu hayay xilka gaabis ku socday dhaqaalaha dalkaasi. Heshiis ay Iiraan laba sano ka hor la saxiixatay wadammada reer galbeedka ee dhanka barnaamijkeeda nukliyerka ayaa waxaa uu horseeday in dalkaasi laga qaado inta badan cunaqabateyntii sarneyd.
Raisi oo ay aad isugu dhaw yihiin hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Ayatullah Khamenei ayaa dhaliilay qaabka loo maareeyay dhaqaalaha dalkiisa iyo saameynta sii kordheyso ee wadammada shisheeye ay ku yesheen Iiraan.
Waxaana maanta lagu wadaa in lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ee doorashada, balse haddii ay dhacdo in la waayo musharrax hela in ka badan boqolkiiba konton, waxay taasi noqoneysa in labada ugu sareeya oo kala ah Ruuxaani iyo Rais ay usoo gudbaan wareega labaad ee doorashada.